Fambolenana anana sy fangaron-daoka hamatsiana ny renivohitra moa no foto-piveloman’ny mponina amin’iny Ambatofotsy manamorona ny lalam-pirenena faha-7 iny. Mampikolay ireo tantsaha tanteraka ny mpanao latsak’alina.
Teo aloha teo dia nakan’ireo olon-dratsy tsikelikely ny vokatra eny an-tsaha ary tsy tsikaritra izany raha tsy andro maro aty aoriana. Amin’ny fotoana ilatsahan’ny orana no mampirongatra ireo malaso raha ny fampitam-baovao azo antoka avy any an-toerana. Lavitra ny tanana anefa ireo toeram-pambolena ka sarotra ho an’ny mpamboly no hanaramaso izany amin’ny alina.
Am-bolana maro ihany koa vao vokatra izy ireny ka tsy vitan’ireo tantsaha mpamboly ny hiasa tany sy hikarakara fambolena ny atoandro ary hiari-tory hiambina eny an-tsaha mandritra ny alina. Etsy an-daniny ihany koa manahy ny ainy ireo tantsaha fa heverin’izy ireo efa mitondra fiarovan-tena na fitaovam-piadiana ireo vonona hangalatra. Miandrandra fandraisana andraikitry ny manam-pahefana sy ny tetikadin’ny fitondrana foibe ireo tantsaha.